Oge eruola igbanwe Strategic Marketing Email mgbe ... | Martech Zone
Ọ bụ Oge Gbanwee Email Marketing Strategies mgbe…
Thursday, May 8, 2008 Fraịde, Ọktọba 6, 2017 Douglas Karr
Ozi ịntanetị gị dị ka nke a:
Ikekwe otu isiokwu ga-akacha esikwu ike ma jiri ahaziri ya mee ihe karịa “ChangeThis: Issue 46”
Ikekwe ụfọdụ akara agbaji ka m ghara kechie ka m na-agụ (Agụghị m ya, ọ gaghị ekwe omume).
Ikekwe ọtụtụ akụkụ mime ozi ịntanetị iji zipu ederede na ndị chọrọ larịị anya, ma HTML ndị nke anyị bụ ndị na-enwe a-ọma e mere email.
Ikekwe okwu mmeghe?
Ikekwe ụfọdụ oghere dị ọcha n’etiti isiokwu iji mee ka ọ dị mfe nyocha?
Ikekwe isiokwu iji gosipụta isiokwu dị iche iche na ịkọwa ọdịiche dị na ha na nkọwa ndị ahụ?
Ikekwe ndepụta edetu na njikọ na ozi metụtara nke ọ bụla?
Ikekwe ndepụta nke njikọ jikọtara na saịtị weebụ?
Ikekwe dị iche Email na-eweta ọrụ ọ bụrụ na nke gị siri ike iji?
Akụkụ dị egwu ebe a bụ na Gbanwee'byline bụ:
ChangeThis na-ekepụta ụdị mgbasa ozi ọhụụ. Ofdị mgbasa ozi na-eji ngwaọrụ dị (dị ka PDF, blọọgụ na weebụ) iji gbaghaa ụzọ e si kee echiche ma gbasaa.
Ọ bụ nnukwu nzukọ nwere ọtụtụ ihe iji kpalie ndị isi na ndị ọchụnta ego. Ọ dị oke njọ na ha họrọ ileghara otu usoro nkwukọrịta na-eme ka m laghachi na weebụsaịtị ha anya.
Enwetara m onwe m.
5 / 8 / 2008: N'agbanyeghị na m debanyere aha, anatara m email a taa. Amaghị ihe nwere ike ime ma ọ bụ nnukwu mmụba:
Tags: listimgbanwenjikọ nkịtịemailnhazi emailisiiwebataahịrị agbajinjikọigwemulti-akụkụ mimealaUsoro isiokwuoghere ọcha
The Cisco I-Nrite Finals!
Budata mmemme a nke anyị wuru iji dozie mmemme anyị?
Mee 8, 2008 na 9: 17 AM
Ikekwe ị kụrụ ya n'isi. Ezi post na nnukwu ndụmọdụ.
Mee 8, 2008 na 10: 30 AM
Mee 9, 2008 na 10: 17 PM
ọkacha mmasị m bụ mgbe onye ahịa gbachitere "Issue46" ha n'ahịrị isiokwu ma ha nwere nọmba mbipụta ọ bụla na ahịrị isiokwu. Anụrụ m n'ezie ka otu onye na-ekwu, "Ọ bụ ka ndị debanyere aha anyị nwere ike hazie ozi-e echekwara na onye ahịa email ha."
Ị na-egwusa m egwu? Ị na-akwụ m nnukwu ego iji gwa gị ka ị ga-esi meghee ọnụ ahịa nke ọma na pịa-thru mana ị chọghị ịmalite n'ahịrị isiokwu? Daalụ na metrik ndị ahụ….